Ciyaar ma ciyaaro - taasina waa sidaad u heli lahayd xanaanada caruurta ee saxda ah
Soo ogow habka aad u qoondayso booska
Isticmaal fursadda tababarka iyo ku kalsoonaanta dareenkaaga
Montessori, xannaanada laba-luqadlaha ah ama laba-labbo ah? Doorashada xannaanada carruurta ee saxda ah way ka fog tahay waalidiin badan. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in ay adagtahay in la helo midda saxda ah ee cunuggaaga sababo badan oo ah fikrado waxbarasho. Dhinaca kale, waxaa jira xaqa doorashada ikhtiyaarka xorta ah ee Jarmalka, laakiin taasi macnaheedu maahan in meel jihada la rabo ay tahay bilaash.
Cunuga ciyaarta ma aha - sidan ayaad u heli kartaa xanaanada caruurta ee saxda ah
Marka laga reebo tan, hooyo ama aabe ahaan, waa inaad taqaanaa shuruudaha lagu aqoonsan karo tayada xannaanada carruurta.
Bilaw inaad bilowdo raadinta xannaanada carruurta midig
Doorashada xannaanada carruurta ee saxda ah
Haddii ilmahaagu dhigto xanaanada caruurta da'diisu tahay saddex sano, diiwaangelinta badanaaba waxay dhacdaa inta u dhexeysa Janawari iyo Maarso. Ilaa Abriil, aqbalida ama dib u soo celinta ayaa la diri doonaa. Wixii hay'ado gaar ah ama kaniisad-maalgaliyey, waqtiyada kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin kuwa ku jira xanaanada caruurta ee degmada.
aad u doonaynin inuu ilmahaagu ka hor daryeelka dhalashada saddexaad ee xarun xanaano maalmeed, maxaa yeelay, aad rabto in aad soo galaan xirfad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, waa in aad bilaabayso raadinta, laakiin ugu yaraan 12 si bilood 15 ka hor shaqo hore laga bilaabo.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan si firfircoon u raadin xanaanada, waa inaad ka fakartaa waxa adiga gaar ahaan muhiim ugu ah daryeelka ilmahaaga. Waxay macno u leedahay in ay sidoo kale tixgeliso dabeecadda ilmahaaga. carruurta xishood iyo hayaa kuwaas oo ilaa hadda la gaarey waayo-aragnimo yar leh daryeelka ilmaha si fiican u eegay ka dib markii ay hindiseen yar oo xubin ka ah koox go'an.
Dabeecadda ilmahaagu waxay noqon kartaa mid muhiim u ah doorashada xannaanada carruurta
Haddii ilmahaagu muujiyo baadhitaan weyn, tusaale ahaan, xannaanad leh oo leh figraan furan ayaa su'aal ka taagan. Intaa waxaa dheer, sida waalid, waa inaad tixgelisaa waxbarashada muhiimka ah ee muhiimka kuu ah. Xannaanad kasta oo maanta ah waxay u shaqeysaa sida fikrad gaar ah. Inta badan, fikradda waxaa laga arki karaa bogga internetka ee machadka ama waxaa laga heli karaa waalidiinta xiiseynaya inay soo dejiyaan.
Xannaanooyin badan oo badan ayaa diiradda saaraya kor u qaadida dhaqdhaqaaqa jirka ama waxbarashada muusiga. Marka laga reebo, waxaa jira xanaanada caruurta laba-luqadlaha ah ama kuwa leh habka barbaarinta sida Montessori ama Waldorf. Waxbarashada diinta iyo dhexdhexaadinta la xidhiidha caadooyinka Masiixiyadeed iyo qiyamka ayaa si gaar ah muhiim ugu ah jaamacadaha.
Ma aha oo kaliya gobol kasta, laakiin magaalada walba waa lacag la'aan si ay u go'aamiyaan sida meelaha xanaanada waxaa la guddoonsiin doonaa. In goobaha magaalooyinka ah, waxaad cayimi kartaa in foomka diiwaangalinta sida caadiga ah lagu xannaaneeyo aad ugu jeceshahay. Caadi ahaan waxaa badanaa la siiyaa carruurta waalid kelidiis ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ku xidhan xajmiga dadka badan, waxay ku xiran tahay maamulka maamulaha in ay ku siiyaan meel kale xannaano meel u dhow meesha aad ku nooshahay. Ma jiro dalab sharci on meel taageero xarunta gaar ah. Waxa keliya in la hubiyaa in qoondaynta meelaha carruurta oo dhan la tixgeliyo.
Xitaa fikradda ugu fiican ee barbaarinta waa qiimo yar haddii qofka xirfadlaha ah uu ku guuldareysto inuu hirgeliyo dhaqdhaqaaqa maalin kasta.
U qaado fursad kasta si shakhsi ah u aragto goobaha su'aasha. Samee qoraal aad horey u sii marineysaan oo aad si gaar ah u xiiseyneyso oo aad u wici karto degaanka. Macluumaadkan, waxaad si fiican u barbar dhigi kartaa goob kasta mar dambe oo aad go'aan ka gaartaa ilmahaaga.
Sidaa darteed, hubso inaad carruurtaada la soo baxdid markaad eegto agabyada shakhsi ahaaneed: Waxaad isla markiiba ogeysiineysaa in gabadhaada ama wiilkeedaba ay wanaagsan tahay oo ay ku soo dhaweynayaan xanaanada caruurta iyo in kale. Dhinaca ugu dambeeya waa in uu had iyo jeer haystaa mudnaanta ugu sarreysa doorashada xannaanada.
Xannaanad wanaagsan ayaa lagu aqoonsan karaa xaqiiqda ah in jawiga diirran uu ku jiro iyo in carruurta iyo waalidiinta loola dhaqmo si qadarin leh. Isdhexgalka shaqaalaha udubdhexaadka waa in ay noqdaan mid iswaafaqsan. Shaqada wanaagsan ee barbaarinta xannaanadu waxay had iyo jeer ku xiran tahay inta ay wadashaqeyntu ka dhex jirto kooxdu.
Taas oo la sheegay, daahfurnaanta waa muhiim. Waa hay'ad aad cunuggaaga daryeesho si aad u gasho iskaashi waxbarasho. Tani waxay ka dhigan tahay, sida waalid ahaan, waxaad la shaqeyneysaa xanaanada caruurta si aad u fiican oo u taageerto horumarka ilmahaaga. Sidaa darteed weydii fursadaha, sida waalidku uga qaybqaato nolol maalmeedka xannaanadda maalin kasta, oo fiiro gaar ah u yeelo booqashadaada ogeysiisyada iyo warqadda warbixinta.
Aan ugu yaraan, goobaha xanaanada ma aha muhiim ahayn. Had iyo jeer maahan inay noqdaan qalabka ugu dambeeya, hase yeeshee, nadiifin iyo farsamo ahaan waa mid muhiim u ah qalabka ciyaaraha wax ku oolka ah. Ka sokow dhismaha. Xirfadaha iyo qalabka dhismaha waa inay noqdaan cayaaraha kuraasta, iyo sidoo kale kaydka, buugaagta sawirada iyo qalabka ciyaaraha ee ciyaaraha ciyaaraha.
Maaddaama ay jiraan 3-sano jir waxay qabaan baahiyo kala duwan marka loo eego carruurta dugsiga xannaanadda, ciyaaraha ku habboon da'da iyo barashada barashada waa inaan la maqlin, taas oo lagaa rabo inaad muujiso. Sidoo kale, ogow waxa shaqada dugsiga xannaanada iyo barbaarinta u egyahay xarun kasta. Horumarinta maalgelinta meelaha mawduucyada foojignaanta, luuqada iyo qorista, is-abaabulka iyo horumarinta garashada garashada ayaa muhiim ah.
Xannaanada caruurta ee wanaagsan, dhamaan su'aalahaaga waa in si faahfaahsan looga jawaabaa. Haddii ay taasi dhacdo ma aha, inaad si fiican u hayn lahaa raadinaya: A daryeelka ilmaha wanaagsan shaqeyn karaan oo keliya haddii dhammaan dhinacyada u hawlgalaan danaha ilmaha iyo aad u dhisi kara kalsoonida hay'ad sida xanaanada waalidka.
Khatarta carruurta - helitaan khilaafaad
Beauty - miyey ku jirta indhaha dabeecadda?
Nooca jacaylka aad tahay?
Kalluunka dhirta - Marka aad buuxisid dhirta saxda ah
Kindergarten & Dugsiga - Taageerada Ilmanimada Hore